Analakely Misy vehivavy marary saina midaroka mpandeha
Nitrangana daroka teny Analakely tamin’iny herinandro iny ary mbola nitohy hatramin’ny omaly.
Vehivavy marary saina iray miaraka amin’ny hazo be no nively zazavavy niaraka tamin’ny fianakaviany, omaly atoandro. Soa fa maro ireo mpiray dia tamin’ny lasibatra ka afaka niaro ilay tovovavy. Raha ny filazan’ireo mpivarotra sy mponina eny amin’ny faritra Analakely iny, mody mipetraka izy ary heverina fa mpangataka. Rehefa mandalo mifanitsy azy ireo miserana eo anoloany dia darohany avy hatrany, ary ny loha mazana no kendreny. Mihatakataka ireo efa mahafantatra raha mbola lavitra ka manatona ity marary saina ity. Ilazaon’ireo mpivarotra hatramin’ny entany na misy mpividy aza.
Ekena fa tanàn-dehibe tsy ilaozana adala, saingy miandrandra fandraisan’andraikitra avy amin’ny manampahefan’ny tanàna sy ny mpitandro filaminana ny mponina, indrindra ireo mpandalo izay tsy manam-po na inona na inona. Raha ny redirediny eny an-dalambe tamin’ny fotoana nandalovan’ny mpanao gazetinay dia voadona ara-pitiavana izy io. Tsiahivina moa fa amin’ny vanim-potoana fanombohan’ny lohataona toy izao, indrindra ny volana jolay sy aogositra izay mampitsiry ny hazo toy izao, vokatry ny fandiniky ny Ntaolo sy ny ray aman-dreny teo aloha, no fotoana fihetsehan’ny kazarana hadalana maro. Ankoatra ireo tena very saina, maro ihany koa ireo indrakindrafana no mirenireny manerana ny renivohitra.